युगाण्डा: बीबीसीका पत्रकार सामूहिक रूपमा पक्राउSandesh
युगाण्डाको प्रहरीले राजधानी कम्पालामा बीबीसीका पत्रकारहरूको एउटा टोलीलाई हिरासतमा राखेको छ। ती पत्रकार सरकारी औषधिका अवैध खरीदबारे अनुसन्धान गर्दै थिए। तिनलाई बुधवार राति पक्राउ गरिएको हो। युगाण्डाको सरकारी प्रवक्ताले तिनको तत्काल रिहाइका लागि माग गरेको रोयटर्स समाचार संस्थाले जनाएको छ।
कारबाहीमा परेका इन्स्पेक्टरलाई ‘पुरस्कार’ !Sandesh
प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाहीमा परेको प्रहरी निरीक्षकलाई आकर्षक पोस्टिङ दिएको भेटिएको छ । धनुषास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, सखुवा, महेन्द्रनगरमा नसियत पाएका प्रहरी निरीक्षक अरुण कुशवाहलाई इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तोडफोड, ६ जना पक्राउSandesh
चितवन भरतपुरको मनकामना अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक जनाको मृत्यु भएपछि आफन्तले तोडफोड गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका ९ सरदपुरका ३८ बर्षका कृष्णप्रसाद भुसालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरेका हुन् ।
विज्ञापनमा कडाइ: सकारात्मक कदम वा अङ्कुश लाउने प्रयासRoshan
विज्ञापनको जगत यसैपनि बढाइचढाइमा आधारित भएको भनिन्छ। तर के अब प्रस्तावित एउटा कानुनले त्यस्ता विज्ञापनलाई अपराधको दायरामा ल्याउन खोजेको हो? प्रस्तावित विज्ञापन कानुनले घुमाउरो ढङ्गले सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर के स्थिति त्यस्तै हो?
पारसलाई बचाउने डाक्टर भन्छन्- हृदयाघातबाट बच्न २ कुरामा ध्यान दिनोस्Roshan
गत साता पूर्व युवराज पारस शाहलाई तेश्रो पटक हृदयाघात भएर थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइयो । त्यसअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छोरा प्रकाशलाई पनि हृदयाघात हुँदा नर्भिक नै पुर्‍याइएको थियो । ढिलो गरी अस्पताल पुर्‍याइएकाले प्रकाश दाहाल बच्न सकेनन् ।
ब्राउन सुगर कारोबारीको काइदा : प्रहरीबाट बच्न ड्रोनको प्रयोगRoshan
प्रहरीबाट बच्न एक जना ब्राउन सुगर कारोबारीले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ । लागूऔषध कारोबारी धरानका वितु भनिने जिनिश गुरुङले ड्रोनको प्रयोग गरेर ब्राउन सुगर बिक्री गर्ने गरेको खुलेको हो । प्रहरीले उनलाई मंगलबार उनकै कोठाबाट पक्राउ गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
झरीमा रुझ्दै ड्यूटीRoshan
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका पश्चिम भेगमा बिहीबार विहानदेखि वर्षा भइरहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकाका अनुसार, पश्चिम वायुले ल्याएको न्यून चापीय प्रणालीको असरले अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित पश्चिम क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ । पानी पर्ने र रोकिने क्रम चलिरहे पनि यो प्रणालीको असरले पश्चिम क्षेत्रमा शुक्रबारसम्म पानी पर्ने महाशाखाको अनुमान छ ।
फेवातालबाट निकालियो २८ हजार घनमिटर माटोRoshan
पोखराको फेवातालभित्रबाट २८ हजार घनमिटर माटो निकालिएको छ । एक सातायता पोखरा महानगरपालिकाले तालमा थुप्रिएको २८ हजार धनमिटर माटो र गेग्र्यान निकालेको हो । फेवातालको बंलादी र गाईघाट क्षेत्रको माटो निकालिएको हो । त्यसमध्ये गाईघाटबाट १२ हजार घनमिटर र बंलादीबाट १६ हजार घनमिटर माटो निकालिएको महानगपालिकाले जनाएको छ ।
३३ किलो सुनकाण्ड : भरिया थुनामा, प्रहरी जागिरमा फर्किए !Roshan
चर्चित ३३ किलो सुन तस्करी एवं मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा भुजुङ गुरुङसहित ८ जनालाई बिराटनगर उच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत मोरङको आदेशपछि थुनामा रहेकाहरुले उच्च अदालतमा रिहाईको माग गर्दै पुनरावेदन गरेका थिए ।
जाडो जानैलाग्दा भारी वर्षा ! हिमपात पनि हुनसक्नेAnkit
केही दिनयता दिनहुँ लागेको चर्को घाम देखेर धेरैले ठानेका छन् अब यस वर्षको जाडो सकियो । तपाईंले पनि यस्तै ठानेर न्याया कपडा र हिटर थन्काइसक्नु भएको हुनसक्छ । तर तीन दिनसम्म भारी वर्षा र हिमपात हुने भएकाले अझै केही दिन चिसो बढ्ने भएको छ । त्यतिमात्र होइन, माघ महिनाको अन्तिम सातामा बाढी र पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै सतर्क रहन सूचना नै जारी गरिएको छ ।
हजारौँ उद्योगको धुँवा, प्लास्टिकको थुप्रो, विषाक्त नदी र मुख्यमन्त्रीको कूचोAnusha
प्रदेश नं. २ का आठैवटा जिल्लामा 'स्वच्छ मधेस समृद्ध प्रदेश'को नारासहित स्वच्छता अभियान थालिएको छ। किन स्वच्छता अभियान आवश्यक पर्‍यो? जवाफ सजिलो छ। प्रदेश नं. २ को खासगरी बारा र पर्साका राजमार्ग क्षेत्रमा तीव्र औद्योगीकरणका कारण वायु प्रदूषण र अन्य औद्योगिक फोहोरमैला विसर्जन निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। फोहोरका कारण सबैजसो नदीनाला ढल बन्ने अवस्थामा छन्।
सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्षले सदस्यलाई बुझाए राजीनामाAnusha
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले राजीनामा दिएका छन् । तर, उनले राजीनामा सरकारलाई होइन, आफ्नो मातहतमा रहेका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीलाई बुझाएका हुन् । सुवेदी तत्कालीन माओवादी कोटामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्य भएका थिए । त्यसैले गुरुङले उनलाई नै राजीनामा बुझाएको स्रोतको दाबी छ ।
चीन र भारत, अमेरिका र युरोप कहाँ कति मासु खाइन्छAnkit
धेरै मानिसहरूले हिजोआज 'मासु कम खानेछु' वा 'अब खाँदै खान्न' भनेको सुन्नुभएको होला। स्वस्थ्य रहन र यसले वातावरणलाई पार्ने प्रभाव वा जनावरको कल्याण गर्ने जस्ता कारण देखाउँदै त्यसो भन्ने गरिन्छ। ब्रिटेनका एक तिहाइ भन्दा बढी मानिसहरुले कि मासु खान छोडेको वा आफ्नो खानामा यसको मात्र कम गरेको दाबी गरेका छन।
सुँगुर वर्ष: के यो मुस्लिमहरूको लागि समस्या हो?Ankit
संसारका विभिन्न समुदायहरू चन्द्रमामा आधारित नयाँ वर्ष मनाइरहेका छन्। चिनियाँ पात्रो अनुसार अबको वर्ष सुँगुर वर्ष हो। नयाँ वर्ष मनाउँदा सामान्यतया सजावट, खेलौना, उपहार र विज्ञापनमा जनावहरूको चित्रण गरिन्छ। तर चिनियाँ राशिफलको अन्तिम जनावर सुँगुर मुस्लिमहरूले अशुद्ध मान्छन् र त्यसको मासु खानुलाई पाप भन्छन्।
सबै स्थानीय तहमा अस्पताल चलाउन संसदीय उपसमितिको सिफारिसAnkit
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपालीहरु सहजरुपमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । सरकारले निशुल्क दिने भनेको ७७ प्रकारका औषधीहरु समेत ग्रामिण भेगका जनताले नपाएको उनीहरुले औंल्याए । ‘ड्राइभरदेखि एम्बुलेन्ससम्मले बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउँदा कमिसन खान्छन् ।
पत्रकारको बढेको न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशAnkit
सर्वोच्च अदालतले सरकारले गत कात्तिकदेखि बढाएको पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दशम्शेर जबराको एकल इजलासले सरकारले श्रमजीवि पत्रकार ऐनअनुसार श्रमजीवि पत्रकारहरुको मात्र न्युनतम पारिश्रमिक तोक्न पाउनेमा श्रमजीवि कामदार, कर्मचारीको समेत न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेकाले उक्त काम कानूनसम्मत हो वा होइन भन्ने विचारणीय देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
टुँडिखेलमा सोनाम ल्होसारको रौनकAnkit
तामाङ समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम ल्होछार अर्थात् नयाँ वर्ष पर्व मंगलबार विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । मञ्जुश्री पात्रोअनुसार आजदेखि कुकुर वर्ष पूरा गरी सुँगुर वर्ष प्रवेश हुन्छ । यो २८५५औँ सोनाम ल्होछार हो । मञ्जुश्री पात्रो शुरु भएको २८५५औँ वर्ष भएकाले सोनाम ल्होछार पनि त्यति नै वर्ष भएको मूल आयोजक समितिले जनाएको छ ।
पुरुषभन्दा महिला बढी बाँच्ने तीन कारण यस्ता छन्Makalu
संसारभर, महिलाहरूको ‍औसत आयु पुरुषहरूभन्दा लामो छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१६ मा जन्मिने मानिसहरू ७२ वर्षको औसत आयु लिएर जन्मिएका थिए। यो तथ्याङ्क लिङ्गका आधारमा औसत आयु छुट्टाउँदा भने महिलाको ७४ वर्ष दुई महिना र पुरुषको ६९ वर्ष आठ महिना थियो।
विजुलीको तार सार्दा एक्कासी करेन्ट प्रवाह, तीन जना घाइतेMakalu
विराटनगर बिजुलीको तार सार्ने क्रममा एक्कासी लाइन आएपछि करेण्ट लागेर तीन जना घाइते भएका छन् । कोशी राजमार्गको विराटनगर भृकुटी चोक खण्डमा बिजुलीको नयाँ पोलमा तार सार्ने क्रममा करेण्ट लागेर तीन जना घाइते भएका हुन् ।
डाक्टर पढ्न चीन र बंगलादेश जाने विद्यार्थीलाई मेडिकल काउन्सिलको नयाँ शर्तMakalu
चीन र बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नयाँ शर्त राखेको छ । काउन्सिलले चीनमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न जानेहरुका लागि चिनियाँ भाषामै चिनियाँ विद्यार्थी सरह नै पढ्नु पर्ने र बंगलादेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि सरकारी मेडिकल कलेजमा पढ्का लागि मात्र स्वीकृति दिने शर्तसहितको मापदण्ड बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।